‘सरकारले डेंगु नियन्त्रणमा गर्न किन सकेन ?’
देशका थुप्रै जिल्लामा फैलिएको संक्रमण रोक्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । ४५ भन्दा बढी जिल्लामा संक्रमण फैलिए पनि त्यसको रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले डेंगु रोगको प्रकोप नियन्त्रण गरेर संक्रमितलाई छिटोछरितो उपचार प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरिन् । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले सभामुख कृष्णबहादुर महरामार्फत् सरकारसँग डेंगु रोगको प्रकोप नियन्त्रण गरेर संक्रमितलाई छिटोछरितो उपचार प्रदान गर्न माग गरेकी हुन् ।
देशभरी डेंगु रोगको संक्रमणबाट जनता आक्रान्त हुँदा पनि प्रकोपको प्रभावकारी नियन्त्रणमा अग्रसर नदेखिएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरिन् । उनले भनिन्, “यस्तो भयाभह अवस्थामा डेंगुको संक्रमणले जनता अक्रान्त हुँदा पनि सरकार यसको प्रकोपको प्रभावकारी नियन्त्रणमा जुटेको पाइँदैन, किन ? डेंगुको संक्रमण देशैभरी पैmलिरहँदा सरकार भने औलो नियन्त्रणको उपाय खोज्न बैठक गर्दैछ, किन ?” देशभर डेंगु संक्रमितको तथ्यांङ्क प्रस्तुत गर्दै सांसद संग्रौलाले थपिन्, “आजको आवश्यकता डेंगुको नियन्त्रणका लागि बैठक हुनुपर्ने हो । त्यसैले डेंगुको प्रकोप नियन्त्रण एवं यसबाट संक्रमितलाई छिटोछरितो उपचार प्रदान गर्न सभामुखमार्पmत् सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।”
उनले साउन महिना यता विभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएका डेंगु बिरामीको संख्या झण्डै ३५ सय ८० नाघिसकेको र चार जनाको मृत्यु भइसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । तराईमा देखिँदै आएको डेंगु रोगको नियन्त्रण सुरुवातबाटै नगरेका कारण पहाडी जिल्लामा समेत फैलिएको संग्रौलाको भनाइ थियो । उनले भनिन्, “सुरुमा तराईमा मात्र देखिने डेंगुको संक्रमण अहिले आएर चितवन, काठमाडौं, कास्की हुँदै देशैभरी संक्रमण बढिरहेको छ । सुरुदेखि नै यसको प्रभावकारी नियन्त्रणमा सरकार लागेको भए देशैभरी यसको प्रभाव भयावह रुपमा पैmलिने थिएन ।”
नेपाली कांग्रेसकै अर्की सांसद तथा सचेतक पुष्पा भुसालले डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि तत्काल ठोस योजना बनाई संसद्मा पेश गर्न सरकारसँग माग गरिन् । ७० हजार भन्दा बढी नागरिकलाई सो रोगको संक्रमण हुँदा पनि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबारे ठोस योजना बनाएर संसद्मा पेश गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको यस्ता विषयमा सरकार किन गम्भिर नभएको ? भनी उनले सरकारसँग प्रश्न पनि गरिन् । उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भेक्टर कन्ट्रोल नियन्त्रकहरुको पद खारेज गरेर हालसम्म पनि डेंगु नियन्त्रणका लागि गाउँगाउँ चिकित्सकहरुको टोली परिचालन हुन नसकेको भन्दै आपत्ति पनि जनाइन् ।
औषधालय आयुर्वेद अस्पतालमा स्तरोन्नति